Ogaden News Agency (ONA) – Guddiga Doorashada Ruushka oo Ka Horjoogsadey Navalny in uu isu sharaxo Madaxweyne.
Guddiga Doorashada Ruushka oo Ka Horjoogsadey Navalny in uu isu sharaxo Madaxweyne.
Posted by Wariye Qaran	/ June 25, 2017
Ninka ugu codka dheer mucaaradka dalka Ruushka Aleksej Navalnyj ayaa loo diidey in uu isu sharaxo xilka Madaxweynaha Ruushka doorashada sanadka danbe 2018, kadib markii ay sheegeen in denbiyo lagu xukumey sida ay sheegeen guddiga doorashada Ruushku maalintii Jimacada.
Go’aanka ka soo baxay Guddiga doorashada ee Ruushanka ayaa ahaa mid la sugaayey. Navalny ayaa la xukumey laba jeer markii u danbeysey ayaa ahayd bishii Febaraayo 2017. Navalny ayaa u arka eedaymaha loo jeediyey kuwo ay sameeyeen aqalka Kreml si meesha looga saaro kuwo khatarta ku ah Madaxweynaha Ruushanka ee Vladimir Putin in ay kala wareegaan xilka.
Dhawaan ayey ahayd markii Navalny lagu xukumey magaalada Moscow laguna eedeeyey in uu ka danbeeyey mudaaharaadyadii looga soo horjeedey Musuqmaasuqa. Navalny ayaa ahaa codka ugu dheer ee ka soo horjeeda Putin iyo Raysalwasaarihiisa Medvedev. Aleksej Navalnyj ayaa ah 40 jir qareen ah u dhaqdhaaqa xuquuqda dadka, waana blogger caan ah.